ကုရှနှင့် mum မှာမူလစာမျက်နှာမှာအီရီထရီးယား - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
ကုရှနှင့် mum မှာမူလစာမျက်နှာမှာအီရီထရီးယား
စက်တင်ဘာလ 19, 2013 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္ /by cre8or
အဆိုပါ McLaughlin အဆောက်အဦး, စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်သင်္ချာ၏ကျောင်းရဲ့နေအိမ်မှတစ်ဆင့် Walking, သငျသညျ, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်တိုင်းရင်းသားနောက်ခံတစ်ကြွယ်ဝတဲ့မတူကွဲပြားမှုနှင့်အတူကျောင်းသားများကိုတွေ့ဆုံရန်။ 40 တိုင်းရင်းသားတွေထက်ပိုပြီးအများအားဖြင့်မဆိုပေးထားသောအချိန်က On-ကျောင်းဝင်းအဆိုပါ MSCS အစီအစဉ်တွင်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်နေစဉ်, ပိုကုရှကိုယ်စားပြုအခြားမည်သည့်နိုင်ငံသားထက်ရှိပါတယ်သိသာဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MSCS အစီအစဉ်ကို 1996 စတင်ခဲ့ကတည်းကတကယ်တော့, ဘွဲ့ရအကြီးဆုံးအရေအတွက်ကအီသီယိုးပီးမှလာကြ၏။ 1205 ဘွဲ့ရထဲက 289 အဲသယောပိဖြစ်ကြသည်။ On-ကျောင်းဝင်းလက်ရှိစာရင်းသွင်းကျောင်းသားများကိုများထဲတွင်နှင့်အမေရိကန်တစ်ဝှမ်း Intern များကိုလုပ်နေတာ, ကုရှလည်း 155 နှင့်အတူကိုယ်စားပြုအကြီးဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအသက်အရွယ် 10 မှာအီသီယိုးပီးထဲမှာကွန်ပျူတာများကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူကို Sundus ယူဆွတ်, အဆိုအရလက်ရှိအိုင်အိုဝါတက္ကသိုလ်မှသုတေသနသတင်းအချက်အလက်စနစ်များဦးစီးဌာန၌သူ၏သင်ရိုးလက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ရေးအလုပ်သင်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကဖွင့် အမေရိကန်အိပ်မက်။ ယူအက်စ်အေကထိုကဲ့သို့သောအကြီးအနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့နှင့်သူတို့အလုံအလောက်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်လျှင်မည်သူမဆိုအောင်မြင်သောနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုဤလောက၏ပုံရိပ်ကိုပေးသည်။ "
ပညာရှင်ပီသစွာ, Sundus တက်ဆော့ဖျဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်သေးငယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်သူ၏လမ်းအလုပ်လုပ်လို, ပြီးတော့ပိုကြီးတဲ့ဆန်းသစ်အိုင်တီအဖွဲ့အစည်းများရန်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းယူလိမ့်မယ်။ သူ Artificial Intelligence ဒါမှမဟုတ် IBM ကပိုမိုထိရောက်သောPlanet®နှင့်ဆက်စပ်သောသုတေသနအထောက်အကူပြုနိုင်အောင်ထို့နောက်သူတစ်ဦးပါရဂူဘွဲ့ဝင်ငွေမှမျှော်လင့်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်အထူးသဖြင့် mum တက်ရောက်ရန်?
သူသည်မိမိရည်မှန်းချက်များကြောင့်တက္ကသိုလ်ပြည့်မီနိုင်ဖြစ်ခြင်းမမြင်ရသည့်အခါ Sundus အခြားအမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကနေ mum လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
: "mum ၏ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ခဲ့
ဒါဟာနီးပါးတိုင်းလူမျိုးအနွယ်များနှင့်ကမ္ဘာ၏ဒေသမှလူများကိုတက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ mum ငါကိုဖြတ်ပြီးလာကြပြီအများဆုံးကွဲပြားခြားနားတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ mum မှာလေ့လာမှုတွင်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်, ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာ၏တိုင်းထောင့်ကနေလူတွေဖြည့်ဆည်းဖို့မသာအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
နောက်ဆုံးဒါပေမယ့်ကျိန်းသေအနည်းဆုံးဘဲ, ကျောင်းအမေရိကန် Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 အိုင်တီကုမ္ပဏီများသည်အကြားတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသည့်လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာစံချိန်နှင့်ဂုဏ်သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤကုမ္ပဏီများသည်မဆိုအတွက်အသုံးချခံရဖို့တိုင်းကျောင်းသားရဲ့အိပ်မက်ရဲ့, နှင့်အစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျကကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်အဆုံးစွန်စမ်းသပ်ဖို့သူတို့ရဲ့အသိပညာထားရန်။ "
သင်သည်အဘယ်သို့ mum မှာသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအတွက်အများဆုံးနှစ်သက်?
အတန်းပိတ်ပင်တားဆီးမှု system ပေါ်တွင်ဖြစ်ကြသည်သောကြောင့် "ကျွန်တော်တစ်ဦးတစ်လတစ်ဦးသင်တန်းလေ့လာဖို့, ပြီးတော့ပြောင်းပေးပါ။ သငျသညျပျင်း get သို့မဟုတ်အချိန်ကာလတခုတိုးချဲ့ကာလများအတွက်လူတန်းစားအတွက်ချည်းခံစားရတယ်ဘယ်တော့မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကြီးလှ၏။ ပတ်ဝန်းကျင်ကအရမ်းတည်ငြိမ်ပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဤ, သင်သည်နက်ရှိုင်းစွာအာရုံစူးစိုက်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်တာဝန်ကျအောင်မြင်ရန်, သင်၏အိပ်မက်ဖြည့်ဆည်းကူညီပေးသည်။ နည်းပညာဒါလျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသည်ကတည်းကငါ့အအစီအစဉ်တွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အဆိုပါသင်တန်းများလည်းအလွန်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည့်နည်းပညာ၏လက်ရှိခေတ်, လိုက်. နေကြသည်။"
သငျသညျအသက်တာ၌အောင်မြင်မှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့အ software ကို developer များအဘယျသို့အကွံဉာဏျပေးမလဲ
"ဘာမနေ့ကဖြစ်ခဲ့သည်ယနေ့မဟုတ်ပါဘူးနှင့်မနက်ဖြန်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဂိမ်းထဲမှာဆက်နေရန်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများ On-to-date ဖြစ်အောင်တက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ တဦးတည်းကိုပိုပြီးအရာသိသင်ရုံ (တဦးတည်းဖြစ်လာရန်သို့မဟုတ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း) တစ်ဦးဆော့ဖ်ဝဲအဖြစ်ထွက်စတင်ဖွင့်ဖြစ်စေ, ကိစ္စရပ်များကိုသိရန်လိုအပ်ပါသောအရာကို, ဒါကြောင့်အကောင်းတစ်ဦးကတိကဝတ်စေ။ mum ရဲ့ Computer ကိုပညာရှင်များပညာရေးစနစ်အံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အဆိုပါသင်တန်းများကို up-to-date ဖြစ်အောင်များမှာ-လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှပေးသောအထူးသဖြင့်နှစ်ပတ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသင်တန်းများ။ ထို့အပြင် Transcendental Meditation® technique ကို၏အလေ့အကျင့်ကိုအရှေ့သို့လမ်းတစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရူပါရုံကိုပေးသောပညာရေးစနစ်နှင့်အတူပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။"
အီရီထရီးယားကျောင်းသားများနှင့်ဘွဲ့ရ 2013 ။
အဲသယောပိကျောင်းသားများကိုအတူမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျနော်တို့ကအီရီထရီးယားကျောင်းသားလူဦးရေအတွက်တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမြင်ကြပြီ။ ဒါဟာသင်ကုရှနှင့်အီရီထရီးယားအရှေ့အာဖရိကတစ်ဘုံနယ်စပ်ကိုမျှဝေကြောင်းဆင်ခြင်သောအခါ, နားလည်အလားတူရာသီဥတု, ဘာသာစကားများနှင့်အစဉ်အလာရှိသည်, နှစ်ဦးစလုံးအရည်အသွေးမြင့်ဘွဲ့ကြိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရေးရှိသည်။ အဲဒီမှာ MSCS အစီအစဉ်တွင် 15 အီရီထရီးယားကျောင်းသားများကိုလက်ရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို 2013 ထူးချွန်ဘွဲ့ရအီရီထရီးယားဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံစလုံးအနေဖြင့်ကျောင်းသားများကဘောလုံးကွင်း (ဘောလုံး) လယ်ကွက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ဘို့ဟန်ဆောင်ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင်ဖွင့်ဖြစ်စေ, မယ့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကုမ္ပဏီပျော်မွေ့။
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/ethiopians-compro.jpeg 1953 3182 cre8or https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png cre8or2013-09-19 20:43:072018-04-23 16:20:18ကုရှနှင့် mum မှာမူလစာမျက်နှာမှာအီရီထရီးယား
Transcendental Meditation®နည်းစနစ်: အိုင်တီအမည်ခံများအတွက်ယှဉ်ပြိုင် Edge ... Software Engineer, ကျောင်းသားများနှင့်ပညာရှင်